Izikhundla zomkhosi waseNigeria-Jonga uluhlu olupheleleyo lweMigangatho yamajoni eNigeria Apha: Iindaba zeSikolo sangoku
Inqanaba lomkhosi waseNigeria ngumqondiso wasemkhosini osetyenziswa nguMkhosi oxhobileyo waseNigeria. Apha ngezantsi luluhlu lwawo onke amaNqanaba oMkhosi waseNigeria ngokulandelelana kwawo. Inqanaba lomkhosi liqulathe okanye lahlulahlulwe laba ziinxalenye ezimbini, amagosa agunyazisiweyo nalawo angagunyaziswanga.
Isebe ngalinye lenkonzo yomkhosi oxhobileyo waseNigeria linophawu olunxulumene noko. I-logo yomkhosi waseNigeria luphawu olunye olwahlulahlula kumkhosi womoya okanye wenqanawa.
Siza kuchaza intsingiselo yokhozi, uphawu lweenkwenkwezi kunye nentsingiselo yokubhaliweyo kwesi-Arabhu ngezantsi nje kwelogo.
Ukhozi oluphawu lomkhosi lubonakalisa ubabalo namandla e Umkhosi waseNigeria. Njengendlela ukhozi olundanda ngayo phezulu kwaye ihlasele ngokuchanekileyo, yindlela umkhosi ohlasela ngayo iintshaba zaseNigeria xa usilwa umlo.
Isimboli yenkwenkwezi ibonisa ubunye beNigeria njengesizwe esinye esingabonakaliyo. Oku kunokulandelwa emva kwi-1914, ngexesha lokudityaniswa.
Umbala otyheli nomnyama kwinkwenkwezi umele amaZantsi aKhuselayo aMazantsi naMantla enza iNigeria enye.
Ukubhalwa kweArabhu kwilogo yomkhosi waseNigeria xa kubhalwe ngesiNgesi kuthetha ukuba 'uloyiso luvela kuThixo yedwa'.
Umbala obomvu kwiflegi umele isoyikiso kunye nezinto zotshaba ngelixa abamnyama bemele amahashe aseNigeria kunye nemikhosi.
Amagosa amiselweyo (CO): ngabaphathi, ukusombulula iingxaki, abachaphazeli abaphambili kunye nabacwangcisi abakhokela amajoni abhalisiweyo kuzo zonke iimeko. inoxanduva lokukhokela kunye uqeqesho lubhalisiwe.
Igosa elingagunyaziswanga (NCO): ligosa lezomkhosi elinikwe igunya ngegosa elithunyelweyo, kodwa alithathwa njengobuphetheyo ngokomthetho.
Izikhundla zemikhosi yaseNigeria zamaGosa aMiselweyo
Umkhosi waseNigeria unezikhundla ezili-11 zamagosa amiselweyo I-Field Marshal elona nqanaba liphezulu phakathi kunye WeLibini uLieutenant elona nqanaba lisezantsi. Apha ngezantsi kukho uluhlu olupheleleyo lweenqanaba lamagosa agunyazisiweyo e-NA:
I-Field Marshal - ★ ★ ★ ★ ★ [5 Iinkwenkwezi]
ngokubanzi - ★ ★ ★ ★ [4 Iinkwenkwezi]
ULieutenant General - ★ ★ ★ [3 Iinkwenkwezi]
Jikelele Jikelele - ★ ★ [2 Iinkwenkwezi]
Brigadier General - ★ [1 Iinkwenkwezi]
WeLibini uLieutenant - [Elona Zinga lisezantsi]
Izikhundla zemikhosi yaseNigeria zamaGosa angaGunyaziswanga
Kukho izikhundla ezi-8 kumkhosi waseNigeria wamagosa angathunyelwanga. Zidweliswe apha ngezantsi:
Igumbi leWarrant Class Class
Igosa eliGunyazisiweyo Class II
Gaya - [Esona sikhundla sisezantsi]
Ubhaliso lweNigerian Army Portal naportal.com.ng Ubhaliso lwama-2021 Jonga amanyathelo okuSebenza
Jonga uLuhlu lwaBafundi kuLuhlu olufutshane ku-2021 waseNigeria Umkhosi wama-81RRI
I-81RRI yomkhosi waseNigeria kuLuhlu olufutshane lwabaGqatswa 2021/2022 yoPhononongo langaphambi kokuvavanywa
Umkhosi waseNigeria 81RRI kuLuhlu lwabaFundi abaDwelisiweyo ku-2021/2022 Bona uluhlu olupheleleyo
Iindaba Zomkhosi waseNigeria Namhlanje 2021 Iindaba Zamabutho aseNigeria zamva nje ngoJulayi
Umkhosi waseNigerian 81RRI woVavanyo loMhla wama-2021 nawo onke amaZiko oVavanyo
Umkhosi waseNigeria 81RRI wokugaya 2021 Isicelo soQhagamshelo www.ims.army.mil.ng
tags: Umkhosi waseNigeria, Izikhundla Zomkhosi waseNigeria
« Kutheni ukuqala kwamashishini asekhaya kungangumbono omkhulu
I-MBA kwiTekhnoloji yoLwazi 2021 Iinkcukacha, Isilabhasi kunye neMisebenzi »